के वुहानको ल्याबबाटै फैलिएको हो कोरोना भाइरस ? चीनले दियो यस्तो जवाफ « Dainik Online
के वुहानको ल्याबबाटै फैलिएको हो कोरोना भाइरस ? चीनले दियो यस्तो जवाफ
प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०७७, बुधबार ३ : २०
चीन । चीनको ल्याबबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको आरोप लागेपछि चीनले यस बारेमा जवाफ दिएको छ। चीनको वुहानस्थित प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस उत्पादन भएको आरोपको वुहान इन्स्टीट्युट अफ वायरोलोजी (डब्ल्यूआईभी) का प्रमुखले उक्त आरोपको खण्डन गरेका हुन्।
डब्ल्यूआईवीका प्रोफेसर तथा यस नेशनल बायोस्याफिल्टी ल्याबोरेटरी का निर्देशक युआन जमिङले चीनमाथि लागेको आरोप दुर्भाग्यपूर्ण रहेको र त्यसको कुनै आधार नभएको बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, हामीले अहिलेसम्म भन्न सक्दैनौँ की यो भाइरस कहाँबाट उत्पादन भएको हो। उनले वुहानसँग भाइरस उत्पादन गर्ने क्षमता पनि नरहेको बताएका छन्।
अमेरिकी राट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस वुहान ल्याबबाट उत्पाद नभएको र त्यसले विश्व महामारीको रुप लिएको आरोप लगाएका थिए। साथै उनले चीनमाथि गहिरो अनुसन्धान भइरहेको भन्दै त्यसको केही समयपछि जवाफ दिन पनि बताएका थिए। अमेरिकाले पटक पटक कोरोना भाइरसलाई मानिव निर्मित बनाएको छ।